सरकारको ‘उद्यमी कर्जा’ – नीति होइन, कार्यान्वयनबाट बुझौं !  HamroKatha
सरकारको ‘उद्यमी कर्जा’ – नीति होइन, कार्यान्वयनबाट बुझौं !
हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यो सहुलियतपुर्ण ऋण भनेको उद्यम वा व्यबसाय गर्नका लागि हो । तपाईसँग कुनै व्यबसायिक योजना छैन भने यस्तो ऋण पाईनेछैन । तपाईले कुन काम गर्न खोज्नुभएको हो त्यसको व्यबसायिक योजना चाहिनेनैं भयो । यस्तो ऋणमा ५ प्रतिशत ब्याज मात्र सरकारले व्यहोर्नेछ । ५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज तिर्नुपरेको अवस्थामा बाँकि ब्याज ऋणी आँफैले तिर्नुपर्नेहुन्छ । र, व्यबसायको प्रकृति हेरी बढीमा पाँच बर्षभित्रमा ऋण चुक्ता गर्नुपर्नेछ ।
हाम्रो कथा २०७५ माघ ८ गते १७:५८
के तपाई उद्यम गर्न चाहनुहुन्छ ? तर लगानीको अभावमा व्यवसाय सुरु गर्न सकिरहनुभएको छैन । त्यसो भए सरकारी यि योजना हेर्नुस ।
साधरण १० लाख र अधिकतम ५ करोडसम्म व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा ।
७ लाखसम्मको शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा
१० लाखको बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा तथा परियोजना कर्जा
१५ लाखसम्मको महिला उद्यमशिलता कर्जा
१० लाखसम्मको दलित समुदाय व्यवसाय कर्जा
सरकारी यस्ता कर्जा योजना तपाईको व्यवसायीक योजना, उद्यममा परिणत गर्ने सुनौलो अवसर बन्न सक्छ । उद्यम सुरु गर्न तपाईले परियोजनामा आधारीत विभिन्न क्षेत्रमा उद्यमका लागि सहुलियत ऋणमा पैसा लिन सक्नुहुनेछ । यो कार्यक्रमलाई केहि बैकहरुले कार्यान्वयनमा अघि बढाई सकेका छन ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठले बताउनुभएको छ, “कर्जा पाउनेले सदुपयोग गर्नु पर्यो I बैंकले चाहिँ उद्यमीहरुको लागी वातावरण निर्माण गर्नु हो I यसको औचित्य भनेको देशमा उत्पादन बढ्नु पर्यो I उद्यमीहरु स्वयमको उत्पादकता बढ्नु पर्यो I यहि जाँच गर्न हामीले बिजनेस प्रपोजल हेर्छौं I अनि व्यवसायको कार्यान्वयन पक्षको
निगरानी गर्नु हाम्रो काम हो I”
तपाईले अब धेरै क्षेत्रमा व्यवसाय अघि बढाउन सहुलियत दरको व्याजमा ऋण लिनसक्नुहुनेछ । उद्यमका विभिन्न शीर्षकमा ७ देखि १० लाखसम्मको ऋण साधारण परियोजना र १० लाख भन्दा बढि ५ करोड रुपैयाँ सम्मका लागि भने विस्तृत परियोजनामा आधारीत सहुलियतपूर्ण ऋण पाउने हो ।
भिम प्रसाद अधिकारीको उदाहरण
दैलेखमा जन्मिएका भिम प्रसाद अघिकारी १५ वर्षदेखि हस्पिटालिटिको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका थिए । उनलाई धेरैपटक लागेको थियो, आफै केहि काम सुरु गर्न पाए कति राम्रो हुन्थ्यो । कुनै उद्यम सुरु गरौं लगानी छैन । बैंकबाट ऋण लिऔं भने ब्याज तिर्ने हिम्मतनैं थिएन । काम गरेर आउने तलब परिवारको गुजारा टार्न पनि मुश्किल पथ्र्यो । त्यसैले आफ्नो ईच्छा यतिकै खुम्च्याउदै बस्न वाध्य थिए उनी ।
अवस्था सधैं कहाँ त्यस्तो रह्यो र । सरकारले भर्खरै सुरु गरेको शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा कार्यक्रम उनका लागि उज्यालो दिन बनेर आयो । सरकारले उपलब्ध गराएको सहुलियतपुर्ण व्याजको ऋण लिएर उनी उद्यमी बन्ने तयारी गर्दैछन् । गएको सोमबार उनले राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक कलंकि शाखाबाट सहुलियतपुर्ण ऋणको पहिलो किस्ता बुझे । होटल क्षेत्रमा कामको अनुभव भएको हुँदा अब उनी होटल व्यबसायलाईनैं अघि बढाउनेगरि तयारीमा जुटेका छन् ।
भिम प्रसाद अधिकारीले बताए, “मैले सीटीईभीटी (CTEVT)बाट कुकिंगको तालिम लिएको थिए I मैले कर्जाका लागी निवेदन दिए I अनि, पहिलो किस्ता बराबरको कर्जा पाएँ I बिजनेस प्रपोजल प्रस्तुत गर्नु हो I वृस्तित रूपमा त्रैमसीक, अर्ध-वार्षिक, वार्षिक योजना र आम्दानीको प्रकृतिबाट राम्रोसँग प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्छ I त्यपछी, वडा कार्यालयमा प्यान PAN रेजिस्ट्रेसनको प्रमाणपत्र पाइन्छ I अनि काम सुरु गर्दा हुन्छ I यसरी नै मैले सतुंगलमा आफ्नै रेस्टुरेन्ट सुरु गरेको हो I”
रजनी हायुको उदाहरण
रामेछापकी रजनी हायु यस्तै मध्येकी एक भाग्यमानी पात्र हुन् । पढाईमा अब्बल रजनीको सपना ईञ्जिनियर बन्नु थियो । तर ईञ्जिनियरिङ पढ्न उनीसँग पैसाको अभाव थियो । सरकारले उपलब्ध गराउने उच्च र प्राविधिक तथा व्यबसायिक कर्जा अन्र्तगतको स्किमबाट सहुलियतमा ऋण पाएपछि उनको ईञ्जिनियर बन्ने सपना पुरा हुनेभएको छ । धितो राख्नुनपर्ने अनि ब्याजको ५ प्रतिशत सरकारले व्यहोर्ने भएपछि उनी निकै खुशी छिन ।
रजनी हायुले व्यक्त गर्नु भयो,“कर्जा बिना मेरो लागी ईन्जीनियरींग पढ्न सम्भव हुदैन थियो होला I यस कर्जाले मलाई पक्कै पनि ८० प्रतिशत जसो आर्थिक रुपले सहयोग गर्नेछ I मैले यो कर्जाको बारेमा विज्ञापनहरुबाट थाहा पाएको हुँ I”
सरकारले आर्थिक रुपमा विपन्न, सिमान्तकृत समुदाय वा लक्षित वर्गको बिद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा पाउनबाट बञ्चित हुन नपरोस भनेर पाँच लाख रुपैंयासम्मको सहुलियतपुर्ण ऋण उपलब्ध गराउँछ । यसप्रकारको ऋण पाउन माध्यामिक शिक्षा उत्तिर्ण गरि २५ बर्ष ननाघेको हुनुपर्छ ।
बिदेशमा रोजगार गरेर फर्किएका युवाहरुको लागि कर्जा
अर्को खुशीको खबरचैं बिदेशमा रोजगार गरेर फर्किएका युवाहरुको लागि । यदी तपाई कम्तिमा ६ महिना काम गरि बैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनुभएको छ भने देशमैं स्वरोजगार बन्नका लागि सरकारले तपाईका लागि पनि सुविधाको ऋण उपलब्ध गराउँछ । यो सुविधा पाउन स्वदेश फर्किएको तीन बर्ष ननाघेको हुनुपर्छ । त्यसका लागि बैदेशिक रोजगार प्रबर्दन बोर्डले सोमबार सम्ममा करिब २० हजार युवाको तथ्यांक संकलन गरेको छ ।
यि युवाहरुमध्येबाटै आफुले सिकेको सीप स्वदेशमा उपयोग गर्न चाहने युवाका लागि सरकारले ऋणमा व्याज अनुदान उपलब्ध गराउँछ । यस प्रकारको ऋणको सिमा भने दश लाख रुपैंयासम्म रहेको छ ।
गएको भदौ २१ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहुलियतपुर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धि एकिकृत कार्यविधि स्विकृत गरेसँगै देशमैं केहि गर्न चाहन्छु, आफुले चाहेको शिक्षा लिन चाहन्छु भन्नेका लागि यो निकै महत्वपुर्ण बनेको छ । यो कार्यक्रमले बैंकबाट ऋण पाउन धितोनैं राख्नुपर्छ भन्ने मान्यताको पनि अन्त्य भएको छ ।
महिला दिदीबहिनिहरुलाई उद्यमशिलता सञ्चालनका लागि सरकारले प्रदान गर्ने सुविधाका सम्बन्धमा । १८ बर्ष पुरा भएका महिलाले कुनै व्यबसायिक योजना बनाएर सहुलियतपुर्ण व्याज अनुदानको ऋण पाउन सक्नुहुनेछ । यदी समुहमा काम गर्न चाहनुहुन्छ भने कम्तिमा पाँच जनाको समुह बनाउनुपर्ने हुन्छ । तपाईले आफ्नो व्यबसायिक योजना अनुसार १५ लाख रुपैंयासम्म ऋण पाउनुहुनेछ ।
दलित समुदाय व्यवसाय कर्जा
अनि तपाई दलित समुदायबाट हुनुहुन्छ भने तपाईकालागि पनि सरकारले उद्यम सञ्चालनका लागि सहुलियतपुर्ण व्याजको दश लाख रुपैंयासम्मको ऋण उपलब्ध गराउँछ ।
हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा
यि माथि उल्लेखित विषय कर्जा पाउने पहिलो आधार मात्र हुन । यसपछिको अर्को महत्वपूर्ण कुरा तपाईसँग कुनै राम्रो व्यबसायिक योजना हुनुपर्छ । आवश्यक आधारसंगै व्यवसायिक योजनामा भएन भने यस्तो ऋण पाईनेछैन । तपाईले कुन काम गर्न खोज्नुभएको हो त्यसको व्यबसायिक योजनामा भने विशेष ध्यान दिनुस् ।
यसमा जान्नेपर्ने अर्को कुरा, यस्तो व्यवसाय गर्न तपाईले जति ऋण लिनुहुन्छ त्यसको व्याजको ५ प्रतिशत ब्याज सरकारले व्यहोर्नेछ । ५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज तिर्नुपरेको अवस्थामा भने ऋणी आँफैले तिर्नुपर्ने हुन्छ । र, व्यबसायको प्रकृति हेरी बढीमा पाँच बर्षभित्रमा ऋण चुक्ता गर्नुपर्नेछ ।